I-OUKITEL WP1: Ukucaciswa kwefowuni entsha erhabaxa | I-Androidsis
I-OUKITEL iyandisa ngokukhawuleza iphothifoliyo yayo yefowuni ngeendlela ezintsha. Enye yeefowuni ezintsha umenzi ubandakanya uluhlu lwayo yi-OUKITEL WP1. Sisisixhobo esirhabaxa esitsha esivela kwifemu. Imodeli emi ngokuchasene nokusebenza kwayo okuhle, enokumelana nazo zonke iintlobo zeemeko ezinzima.
Ifowuni ekwahlukileyo ukuba ineenkcukacha ezifanelekileyo, phakathi kwayo Iqaqambisa ibhetri yayo enkulu. Ke siya kuba nakho ukufumana okuninzi kule OUKITEL WP1 kuzo zonke iintlobo zamaxesha. Ukulungele ukufumana okungakumbi malunga nale modeli?
Ifowuni ine-5,5-intshi yesikrini esine-HD + isisombululo (720X1440 pixels) kunye ne-18: 9 screen ratio. Ke inkampani ikhethe uyilo olwaneleyo ngoku malunga noku. Njengeprosesa, ine-core-core MediaTek MT6763.
Ukongeza, le OUKITEL WP1 ifika nge-4 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina. Njengoko besitshilo, ibhetri yayo yenye yamandla ayo. Inomthamo we-5.000 mAh, Esinika inkululeko enkulu. Ukongeza, ikhawulezisa ukutshaja, yeyokuqala uphawu ukutshaja ngaphandle kwamacingo. Inyathelo elibalulekileyo lomenzi.
I-OUKITEL WP1 iyamelana namanzi kunye nothuli, enkosi kubukho besatifikethi se-IP68 kumnxaba. Into ebalulekileyo kwimodeli erhabaxa enje. Sinokubona kwividiyo engentla ukuba uyazi njani indlela yokumelana nazo zonke iintlobo zeemeko ezinzima, ezibonisa ukumelana kwakhe.
Umhla wokukhutshwa kwe-OUKITEL WP1 awukabhengezwa ngokusemthethweni. Kulindelwe ukuba izakwaziswa kwintengiso, nangona okwangoku singenayo idatha kolu phehlelelo, kunye nexabiso lentengiso. Sinethemba lokuva okungakumbi malunga noku kungekudala. Ucinga ntoni ngale fowuni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-OUKITEL WP1: I-brand entsha ye-smartphone ekrwada
I-OnePlus ibhengeza umhla wokubonisa we-OnePlus 6T